Corona virus : "Ao anatin'ny fiombonana sy ny fifamenoana, ary fandalana ny soatoavina Malagasy no iatrehantsika ny ady atao amin'ny valan'aretina" | Primature
Corona virus : “Ao anatin’ny fiombonana sy ny fifamenoana, ary fandalana ny soatoavina Malagasy no iatrehantsika ny ady atao amin’ny valan’aretina”
Mahazoarivo, 22 jona 2020 – Tahaka ireo Faritra maro nahitana ny soritr’aretina Covid-19, dia nanatanteraka dinikasa niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny avy amin’ny Faritra Anosy sy Androy izay natao tao amin’ny distrikan’I Taolagnaro ny delegasiona izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governementa Ntsay Christian, androany.
Fivoriana niaraha-nidinika sy nifampizarana mahakasika ny paikady entina miatrika ny fihanaky ny valan’aretina ho an’ny tapany Atsimon’ny Nosy, fa indrindra ho an’I Anosy sy Androy. Nisy araka izany ny fanaovana jery todika ny rindran-damina sy ny fandaminana rehetra momba ny ady atao amin’ity valan’aretina ity, ary nahafahana nitondra vahaolana maro samihafa ho fanamafisana ny fifamenoana tokony hisy eo amin’ny fitondrana faobe sy ny tompon’andraikitra eny ifotony manoloana ny ady lehibe izay atrehin’ny firenena. Nodinihina nandritra izao fifanakalozana izao ihany koa ny fomba entina hanampiana ireo tena marefo, araka izany dia hisitraka vatsy tsinjo ireo distrika rehetra izay voakasiky ny valan’aretina fa indrindra hiatrehana ny anoanana ateraky ny hain-tany izay mahazo ny distrika maromaro any amin’ny tapany Atsimo. Nitondra fanafody sy fitaovana maro ahafahana miatrika izao valan’aretina izao ihany ny delegasiona.
Eo amin’izay fiatrehana ny fiparitahan’ny Corona virus izay hatrany dia nankasitraka ny firaisan-kina nasehon’ireo tompon’andraikitra amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy ny Praiminisitra, tamin’ny fanarahan’izy ireo amin’ny antsakany sy andavany ireo fepetra izay noraisin’ny fanjakana foibe, ary nahafahana nifehy ny valan’aretina. “Raha tsy nisy tokoa ny fifamenoana dia ho sarotra ny nifehy ny fihanaky ny Corona virus”, hoy izy. Raha ny fivoaran’ny toe-javatra ao Taolaganro manokana no jerena dia mahavelombolo tokoa ny vokatra satria efa saika namonjy fodiana avokoa ireo olona nitondra ny tsimok’aretina na “cas positif”, mbola misy ihany anefa ireo mbola manaraka fitsaboana saingy efa mihatsara ny fahasalamany.
Mahakasika ny fampandrosoana ny faritra kosa, dia nanamafy ny lala-tsaina vaovao hitondrana ny firenena ny Praiminisitra ka nilazana fa “manomboka izao dia tsy hisy distrika ho latsa-danja intsony amin’ny fampandrosoana indrindra amin’ny fametrahana fotodrafitrasa fototra sy fotodrafitrasam-pampandrosoana, ka omena vahana kokoa ny fandraisana anjaran’ny eny ifotony amin’izany”. Mikasika ny lalam-pirenena faha 13 dia nambarany fa tafiditra ao anatin’ny tetikasam-panjakana ny fanamboarana azy na dia tsy voalaza nandritra ny fandravonana ny fandaharan’asa ho fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny fanjakana izay natolony teo anivon’ny Antenimieram-pirenena aza izany. Efa mandeha ny fandinihana mahakasika ny asa ary efa fantatra ny mpiara-miombon’antoka hiara-hiasa amin’ny fitondrana Malagasy ho an’ny fanatanterahana izany.
Nandritra izao fotoana izao ihany koa no nanolorana ny fiara tsy mataho-dalana ho an’ny sampan-draharaham-pitantanan’ny Ministeran’ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidiovana ao amin’ny Faritra Anosy sy Androy.
← Fametrahana lamina ho fiadiana amin’ny fihanaky ny valan’aretina Covid-19 ao Analanjirofo
Lahateny fanolorana ny Tatitra mahakasika ireo asa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny Fanjakana – Antenimierandoholona →